Wararkii ugu dambeeyay dagaalo khasaaro geystay oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose | HalQaran.com
Home Warar Cusub Wararkii ugu dambeeyay dagaalo khasaaro geystay oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose
Wararkii ugu dambeeyay dagaalo khasaaro geystay oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose
Baraawe (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya, in dagaal khasaaro dhimasho iyo dhaawac geystay ay ka kala dhaceen degmooyinka Baraawe iyo Qoryooley, kaasi oo u dhaxeeyay Ciidamada DFS & AMISOM oo isku dhinac ah iyo Ururka Al-Shabaab.
Xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerareen Saldhigyada Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin degmooyinka Baraawe iyo Qoryooleey, waxaana halkaasi ka dhacay dagaalo culus oo geystay khasaaro kala duwan.
Dadka ku nool degmooyinka lagu dagaalamay ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ah ay isku adeegsanayeen labada dhinac, islamarkaana ay arkeen khasaaro soo gaaray askar iyo dad Shacab ah.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Millateriga Soomaaliya ayaa dhankooda waxay Warbaaahinta u sheegeen inay iska difaaceen weeraradii kaga yimid dhinaca Ururka Al-Shabaab, islamarkaana ay Khasaaro gaarsiiyeen Al-Shabaab.
Xaalada degmooyinka Baraawe iyo Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa iminka ah mid degan, waxaana la sheegay in duleedka degmooyinkaas ay Ciidamada Dowladda ka wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku baadi goobayaan Xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday.
Si kastaba, ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa labadii todobaad ee la soo dhaafay waxaa ay howlgallo kala duwan ka wadeen degmooyin iyo degaanno ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana Saraakiisha Ciidamada ay sheegeen in howlgalladaas ay ku dileen Saraakiil iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Dagaal khasaaro geystay